Hiriira Waamuu Dura Ammatti Bu’aa Isaa Madaaluun Murteessaa dha – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooHiriira Waamuu Dura Ammatti Bu’aa Isaa Madaaluun Murteessaa dha
#Dhaamsa Yeroon gaafatu Qaamota Dhimmi ilaallatuuf:-
“Marii Malee Miiraan Socho’uun Maraatummaa dha.”
Goolama siyaasaa Biyyattii keessatti amma deemaa jiruun walqabatee bu’aan hiriira waamuu irraa argamu yoo jiraate Wareegama hin feesifne baasuu duwwaa dha.
Hiriira mormii karaa nagahaa gaggeessina jechuun Biyyattii kana keessatti kanneen sagalee hin qabneef sagalee taanaan caalmatti sagalee nu dhabsiisa.
Jijjiiramni Qabsoo amma dhufe kunis Wareegamaan dhufe, wareegama darbaa herregamuu hin dandeenyetuu itti bahee as gahe, osoo isa darbeef gaddaa jirruu caalmatti wareegama yeroon wal hin ginne wareegama hin barbaachifnne kaffalluun nurra hin jiraatu.
Yeroon kun yeroo akkaan ulfaataa murni Abbaa irree maqaa ol aantumaa seeraa kabajuu jedhuun tarkaanfiilee hin,barbaachifne gar jabeenyaan lammiilee nagahaa irratti fudhataa jiranii dha.
1. #Lammiilee Oromiyaa Biyya keessaatiif:- yeroo akkaan ulfaata kana keessatti maq-balleessii akka sabaatti Ummata Oromootti faaluuf murni PP qopheefate uf irraa kiffisuuf sabaa fi sab-lammoota si faana jiran hammattee iddoo jirtutti obsaa fi murannoon Jaarmiyaalee Siyaasaa fedhii fi hawwii bara dheeraa qabdu Gabrummaa sirraa kaasuuf qabsaawaa turanii fi jiran Gurra qeensitee dhageeffachuu duwwaa dha.
2. #Qeerroo fi Qarree Oromootiif:- Qabsoon marii malee miiraan sochoosan wareegama hin barbaachifneef nu saaxila. Kanaaf, #Qeerroo Bilisummaa Oromoo akka jaarmiyaatti ijaaramee jiru jala hiriiruun Tooftaa fi Tarsiimoo qabsoo Qeerroon Bilisummaa Oromoo isiniif akeeke jala masakamuun ala waamichaa fi ajaja qaama kamiitiinuu wareegama hin feesifne kaffaluun gonkumaa hin barbaachisu! Isintuu dhaloota Qabsoo harkaa qabu waan ta’eef!
3. Paartiilee Siyaasaa Oromoof:- Yeroon kun yeroo akkaan ulfaataa diinni alaa fi keessaan isin irratti qiyyaafatee maqaa dhibee COVID-19 Golgaa godhachuun filannoo dhufus yeroo isaatti akka hin gaggeesine isin dhiibaa jiruu fi hookkaroota biyyattii keessatti kaasuun Barjaa kijibaa isinitti maxxansee marii isin waliin taasisu keessattis doorsisaan gaafatamummaa jalatti isin hidhaa jiruu dha! Yeroo kana keessatti garaagarummaa keessan walii kabajuun walitti dhuftanii hookaraa fi goolama siyaasaa mootummichi uumuun lubbuu namootaa galaafachuu cinatti miseensotaa fi hooganoota keessan dabalatee Lammilee biyyattii jumlaan mana hidhaatti guure akkamitti akka baasisiisuu qabdanii fi fuula duratti maaltuu ta’uu qaba? Akkamitti ummata keenya rakkoo yaaddessaa fi booddesaa kana keessaa baasnaa irratti mari’achuuf yeroon qabdan amma turtii torbaanota hin guunee dha.
4. Medialeef:- Miidiyaa jechuun meeshaa lolaa Taankii fi Madfii caalaa fira ittii gammachiisuu fi diina ittiin rifaasisuuf dhimma itti bahamu, addatti meeshaa Shira diinaa ittiin Saaxilluu fi Dhugaa ittiin ifa baafnuu dha. Ta’us, miidiyaan kamuu sirnaa fi seera ittiin bulmaataa qabuun ethics media keessaa osoo ala hin bahin miidhaa fi bu’aa ummataa tilmaamuun dirqama isaa raawwata. Waan ta’eef, waamichaa fi Labsiin yeroo ammaatti haala amma jiru keessatti ta’aa jiru gaaga’ama guddaa waan dhaqqabsiisuuf bakkuma jirtanitti waan ummataaf ta’u xiinxaluun hojjadhaan dhaamsa yerooti.
4. Aktiivistotaaf:- Aktivistoonni keenya, keessaayyu kanneen biyyoota ollaa fi alaa jirtan haala jiru Xiinxalaa fi dhageettii malee arguun kanneen isinitti ulfatu akka lammiilee quuqaa fi quuqama ummata keessaniif qabaachuun halkanii fi guyyaa hojjetaa jirtaniitti (as social contracters) Hubannoon isin qabaachun irratti hojjataa jirtan kan amma dhufee, ammuma kufu ta’uu hin qabu! Wareegama yeroo fi humna barbaachisu faana deemu akka baasan irratti hojjechuu dha. Wareegama hinnbarbaachifne akka baasaniif wal dirquun bor gaabbii seenaatti hafuu hin qabnu!
5. Hawaasa Biyoota Ollaa fi Alaa Garaa garaa keessa jirtaniif:- Goolama biyyattiin keessa jirtu akkaan hubachuu dhaan, keessattuu Oromiyaa keessatti Ajjeefamuu Artist Haacaaluu Hundeessaa booda lubbuun lammiilee hedduu wareegamuu fi lammiileen biyyattii addatti Hooganootaa fi miaeensonni paartiilee morkattootaa hidhamuuf hiriirri bahaa turtanii fi jirtan akkuma jirutti ta’ee, hiriira taasifamu keessatti haqaa fi mirga sabaa fi sab-lamootaatti osoo hin bu’in afaan seeraatiin qaama isin dhagahuuf gurra qabutti iyyachuu dha. Caalmatti Garaamummaan miidhama saba keessanii isinitti dhagahamu ibsachuu duwwaa osoo hin taane waan ummata keenya miidhuu fi hin miine addaan baafattanii waan hojjattan caasaa Qabsoo keessa hojjachuu dha. Wal dhageefachuu fi wal jala masakamuu , hoogansa biyya keessaa mariisisuu fi gurra ergisuufiin qajeelfamoota qabsoo barbaachisu hojii irra oolchuu duwwatuu injifataa nu godha. Kanaan ala marii malee Miiraan socho’uun dhaloota gabrummaa dhalchisuu ta’a.
Walumaa galatti dhugaa lafarra jiru hubachuu dadhabuun hoji manee diinaa osoi hin beekin hojjachuun, Wareegama hin taane nu kafalchiisa. Alagaa nutti kofalchiisa. Dhaloota dhufutti gabrummaa dheeressa!
Kanaafi kan “Marii Malee Miiraan Socho’uun Maraatummaa dha.” Jedheef!
Injifannoo Umata Oromoof!
RAAYYAA WALLOO MATAKKAL OROMIYAA DHA
Gaafiif - Deebii Bakka Bu'aa Uummataa Parlaamatti, Ali Wario Waliin
Gaafiif - Deebii Bakka Bu'aa Uummataa Parlaamatti, Ali Wario Waliin ﻿ ﻿
Galmi Waraana Kononeel Abiyi Morma Isaa Funyoof Kennuu Dha Damee Boruu: Sadaasa 13, 2020 Bifa…